ဒူဘိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်ရှာဖွေမှုပလက်ဖောင်းဆယ်ခု | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းဆယ်ခု ဒူဘိုင်း သင်တို့ကိုအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
ဒူဘိုင်း, အများ၏စီးပွားရေးမြို့တော် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုက၎င်း၏ဇိမ်ခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့လူသိများ, လူနေမှု, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ဗိသုကာနှင့်ဘာသာရေးသည်းခံမှု၏အရည်အသွေး။
ထိုကဲ့သို့သောပြင်သစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော၏ Insead Alumni အစည်းအရုံး၏အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ အရေအတွက်ကတဦးတည်းအသက်ရှင်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ City နှင့်အလုပ်အဖြစ်ဒူဘိုင်း။ ဒူဘိုင်းကဤကြိုဆိုပွဲနာမည်ကျော်တှငျနထေိုငျနှငျ့အလုပျသူမြားစှာကျွမ်းကျင်သူများတစ်စက္ကန့်နေအိမ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည် အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စု။
သငျသညျအလုပျအတှကျဒူဘိုင်းတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်, ပြီးသားဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် နှင့်သင်၏နောက်ပြင်ဆင်နေ ရာထူး ပြောင်းရွှေ့, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဈေးကွက်သို့ထိုးဖောက်ဖို့ရှာဖွေနေကျောင်းသားတစ် ဦး?
ဒီမှာပါ တကျိပ်လူကြိုက်များပလက်ဖောင်း သင်၏နောက်ကိုရှာရန်ကူညီမည့်အထူးအစီအစဉ်မရှိပါ အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက် ဒူဘိုင်း၌တည်၏။
LinkedIn တို့ဟာဖြစ်ပါတယ် အကြီးဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက် site နှင့်ကောင်းစွာအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံး။ လူမှုရေးကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူဦးဆက်သွယ် အများအားဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူ။ LinkedIn တို့သုံးစွဲဖို့, သင် sign up ကိုနှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုတညျဆောကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အခုသင်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်စတင်နိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့်, LinkedIn တို့သင်၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အခြေခံချိတ်ဆက်ရန်လူတွေကိုအကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ သို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေစတင်ရန်သည်, "ဂျော့" icon လေးတွေ့ပါကသင်၏အလုပ်လယ်ပြင်နှင့်တည်နေရာအတွက်အမျိုးအစားနှင့်ရှာဖွေစတင်ဖို့။
LinkedIn တို့ဖွငျ့အလိုအလျှောက်တစ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့််ထမ်းခေါ်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်သင်အညီအမျှအတူတူပင်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာပြင်ပ site ကိုမှတစ်ဦး redirection ရန်သင့်အပြည့်အဝပရိုဖိုင်းကိုပူးတွဲ: လွယ်ကူစွာလျှောက်ထားရန် options နှစ်ခုရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် တိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေလူ့အရင်းအမြစ်ပညာရှင်များ, ဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ် add တဲ့သူထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများ၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင် CV ကိုရဲ့နဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်ပြရန်။ အဆိုပါ LinkedIn တို့ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုသင်တို့ကိုလည်းတိုက်ရိုက်တချို့ရှာဖွေစုဆောင်းကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်နှင့် အသုံးချအလုပ်အကိုင်များဘို့အမြင့်ဆုံးမြင်ကွင်းအဆင့်ကိုထောက်ပံ့ပေး.
အပြင်အလုပ်-ရှာလှုပ်ရှားမှုများမှသည်ဘဝနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးအသုံးဝင်နိုင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း, ကုမ္ပဏီများနှင့်အုပ်စုများက shared ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားရေးသားချက်များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုရှိပါတယ်။
အမှန်စင်စစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တယ် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ post မှအလုပ်ရှင်များများအတွက်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းနှင့်အလုပ်ရှာသူများအတွက်ထိုအလုပ်များကိုလျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှာသူများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ဝင်ရောက်၍ သို့မဟုတ်သူတို့၏လျှောက်လွှာကိုကူးယူနိုင်သည် Google iOS ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Android သို့မဟုတ် App Store တွင်ကစားပါ။ သင်စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည် သင်၏ CV သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload။ ထိုနောက်မှသင်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီးအမှန်စင်စစ်ပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်လျှောက်ထားရန်သတ်မှတ်ထား; သင်ပြုလိုအပ်သမျှကို click ရန်ဖြစ်ပါသည် '' Apply '' နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုအလိုအလျောက််ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူမျှဝေ, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ် site ဆီသို့ပါလိမ့်မည် သငျသညျတူညီသောအခန်းကဏ္ဍများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
နှစ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှာဖွေ, သင်သော့ချက်စာလုံးနှင့်တည်နေရာကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်မယ်လို့နှင့် ကြောင်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုအလုပ်အကိုင်များပြသပါလိမ့်မည် အလိုအလျောက်လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးများအတွက်နောက်တစ်ကြိမ် setting သင်၏ပရိုဖိုင်ထဲမှာကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ Indeed.com အခမဲ့အလုပ်ရှာဖှေ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး, သငျသညျကြော်ငြာအလုပ်အခန်းကဏ္ဍရှာတှေ့နိုငျ ကဏ္ဍအားလုံးတွင်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကနေ။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တိုက်ရိုက်အလုပ်သမားစျေးကွက်အပေါ်ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်အပိုင်း, လစာသည်နှင့် ပွင့်လင်းအလုပ်အကိုင်များ.
အမှန်မှာ - ဒူဘိုင်းအတွက်ဆယ်ပါးလူကြိုက်များသောယောဘကိုရှာရန်ပလက်ဖောင်းများ
Bayt အဆိုပါတစ်ခုဖြစ်သည် ဦးဆောင်အွန်လိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးတွင်ကျယ်စွာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကမှာ။ ဒီပလက်ဖောင်းဖန်တီးခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောသက်သေပြလျက်ရှိသည် ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အလမ်းများ။ ကွဲပြားတဲ့အလုပ်အခန်းကဏ္ are ရှိပါတယ် ယူအေအီး နိုင်ငံသား၊ လတ်ဆတ်သူ၊ အဆင့်မြင့်အလုပ်များ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ အလုပ်အမှုဆောင်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အပိုင်းအချိန်အလုပ်အကိုင်များ။ ရိုးရှင်းစွာသူတို့ရဲ့ website မှအပေါ် logging နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှတ်ပုံတင်မှတဆင့်သွားခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားစတင်နိုင်ပါသည်။ ၏ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ CV ကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်ခု option ကိုလည်းရှိပါသည် မြင်ကွင်းတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်ရှင်များရန်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုအများပြည်သူအောင်.
ရှာဖွေနေသူတွေအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် CV ကိုစာအရေးအသားန်ဆောင်မှုများအတွက်, Bayt.com, Arabic သို့ဘာသာပြန်ဆိုတစ်ဖုံးပေးစာ add နှင့်သင့် LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကို Build ဖို့ရွေးချယ်စရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ website တွင်တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံမှာဒီပေးထားပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ကာ, ဘလော့ဂ်အပိုင်းလည်းမရှိ အပေါ်အကြံပေးချက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကမ်းလှမ်းသော website တွင် အလုပ်ရှာဖွေမှု, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှင့်စျေးကွက်အသိပညာ။
ချက်ချင်းအလုပ်အပြောင်းအလဲရှာနေကြသည်မဟုတ်သောသူတို့အဘို့, အလားအလာရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် Bayt.com ရဲ့ဒေတာဘေ့စသို့ CV ကိုရဲ့ပို့စ်တင်ဘို့ရွေးစရာတခုရှိတယ်။
Bayt.com - ဒူဘိုင်းအတွက်ဆယ်ပါးလူကြိုက်များသောယောဘကိုရှာရန်ပလက်ဖောင်းများ
Dubizzle အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်ဦးဆောင်လျှို့ဝှက်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါ website ကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုရှာခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတှေ့နိုငျတဲ့ '' ဂျော့ဘ် '' အပိုင်းရှိတယ်။ သင်လိုအပ်အားလုံး, Dubizzle နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် login, သင်၏ CV နှင့်အသုံးပြုမှု upload ဖို့ဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်ဒက်ရှ်ဘုတ်။ အလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်း site ပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်များ post ရန်အဘို့အယခင်ကကအခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကြောင်းနှငျ့ ပတျသကျ. တစ်ဦးပေးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့ကတည်းကအဲဒီမှာနည်းပါးလာအလုပ်တင်ခြင်းပါပြီ, ဒါပေမယ့်တစျစိတျခပြါရနိုင် သူတို့အနေနဲ့တည်ရှိအလုပ်လျှောက်ထားကြသည် ကတည်းက site ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှဆက်ပြောသည်အများကြီးပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားရှိခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျကုမ်ပဏီ, ကဏ္ဍသို့မဟုတ်တည်နေရာအားဖြင့်နေ့စဉ်လတ်ဆတ်သောအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်ဆင့်များအတွက် အဖြစ်အချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အခန်းကဏ္။ ။ အဲဒီမှာ ဘလော့ဂ် အပေါ်အထူးဆောင်းပါးများနှင့်အတူစာမျက်နှာပေါ်တွင်အပိုင်း အလုပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုး.
Gulftalent ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး site ကိုပံ့ပိုးပေးသည်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း နှင့်ပင်လယ်ကွေ့နှင့်မြောက်အာဖရိကဒေသ။ သူတို့ရဲ့ website တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ CV ကို upload တင်နှင့်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပင်လယ်ကွေ့ Talent: ပရိုဖိုင်းကိုတညျဆောကျနိုငျသညျ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့အှနျလိုငျး။
ပင်လယ်ကွေ့ Talent: ကုမ္ပဏီများ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကို advertise ဖို့ပလက်ဖောင်းပူဇော်ဒါပေမယ့်လည်းအများဆုံးပါဘူးမသာ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ CV ကိုရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏ (optional) သူတို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စမှတဆင့်အဘို့အရင်းမြစ်။ မှတ်ပုံတင်ရန်အသုံးပြုပုံတစ်ဦးလည်းမရှိ အခမဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သတိပေးချက်များနှင့် CV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်လက်ခံရရှိရန် option ကို။ အလုပ်ရှာဖွေသူများလည်း၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် CV ကိုရေးသားန်ဆောင်မှုများပေးသော်လည်းနှင့်ကြေးမှာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြကိုယ်ရေးအချက်အလက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များ, လစာသတင်းအချက်အလက်နှင့်လုပ်အားစျေးကွက်သုတေသနအဖြစ်ကောင်းစွာ website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သတင်းစာများတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေလူကြိုက်များလမ်း နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်ပုံနှိပ်၌တည်၏။ ယူအေအီးအများစုသည်သတင်းစာကြော်ငြာထံအပ်နှံကဏ္ဍများရှိ အလုပ်နေရာလွတ်.
Credit: Khaleej Times သတင်းစာ
ပင်လယ်ကွေ့သတင်းများ စာဖတ်သူများ အလုပ်သစ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ '' အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး '' section မှာသူတို့ရဲ့ Classified စာမျက်နှာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသတင်းအချက်အလက်၌တည်၏။ သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်တယ် getthat.com တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံအပိုင်းဘယ်မှာရှိတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများမှတ်ပုံတင်ပြီးအလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Khaleej Times သတင်းစာ
Khaleej Times သတင်းစာ သတင်းစာ, ယူအေအီးအရှည်ဆုံးအပြေးအင်္ဂလိပ်နေ့စဉ်ကိုလည်း တစ် section မှာအလုပ်စာရင်းများကမ်းလှမ်း ယင်း၏ပုံနှိပ်၏။ Buzzon သူတို့ရဲ့ဝယ်သည်နှင့်လည်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘို့တိကျတဲ့အပိုင်းသည့်အွန်လိုင်းပေါ်တယ်ရောင်းချပါတယ်။ ဒီမှာ, အလုပ်ရှာဖွေသူများအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတှေ့နိုငျ အဆိုပါကြော်ငြာအခန်းကဏ္ဍနှင့်လျှောက်ထားရန်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပါ။
အယ်လ် Waseet တစ်ဦးရှိပါတယ်အွန်လိုင်းပုံနှိပ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါနှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ '' ဂျော့ဘ် '' အပိုင်း အင်္ဂလိပ်နှင့် Arabic အဘိဓါန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဘယ်လောက်အဘယ်မှာထိုသူတို့အဘို့လျှောက်ထားရန်အပါအဝင်ရှိနိုင်ပါအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။
Read သည်အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေသောအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်ကြေငြာစာတမ်းဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းမက်ထရိုစခန်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လာမယ့်အပေါ် ခရီးစဉ် ဒူဘိုင်းမက်ထရိုတွင်သင်ရွေးနိုင်သည် မိတ္တူနှင့်အလုပ်အကိုင်လွတ်ကြော်ငြာရှာတွေ့ ၏ 'ခွဲခြား' 'စာမျက်နှာတွင် စာဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းပေါ်တယ်အပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံပေးချက်များကိုရှာပါ။
Laimoon တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဝန်ထမ်းများမှအလုပ်ရှင်များဆက်သွယ်အလုပ်က်ဘ်ဆိုက် သူတို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်အလုပ်လျှောက်ထားသူမှတုန့်ပြန်သေချာသည်။ ဒါဟာအလုပ်ရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးစလုံးမှအခမဲ့ site ကိုဖြစ်ပါသည်, ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် သုံးဆယ်ကျော်နိုင်ငံများသို့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ။ ဤနေရာတွင်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသောအခါ, '' Laimoon အတည်ပြုပြီး '' ကုမ္ပဏီများလျှောက်ထားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်လျှို့ဝှက်ပေမယ် Laimoon နေဖြင့် check လုပ်ထားနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြီနဲ့ လစာအသေးစိတျအပါအဝင်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်.
Laimoon လည်းရှိပါတယ် သင်တန်းများအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံအပိုင်း သငျသညျ Academic ကိုယ့်ကိုယ်ကို upgrade လုပ်ဖို့သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရှာတှေ့နိုငျတယျ။ ကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေးရွေးချယ်စရာသူတို့ရဲ့အပေါ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည် အုပ်စုများနှင့်ကုမ္ပဏီများများအတွက်က်ဘ်ဆိုက် အဘယ်သူသည်ဤဝန်ဆောင်မှု၏ပေးသော်လည်းချင်ပါတယ်။
Naukrigulf ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေရေး site ကိုဖြစ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိုမန်, ဘာရိန်းနှင့် ကာတာနိုင်ငံ။ Naukrigulf.com အတူအလုပ်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်စဉ်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပို့စ်တင်ပြီးရင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူစတင်သည်။ ဒေသတွင်း၌အများအပြားထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများဒါ Naukrigulf.com နှင့်အပေါ်အလုပ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ကြော်ငြာ သင်သည်သင်၏ဦးစားပေးအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အတိအကျပွဲစဉ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အအမျိုးအစား, ကျွမ်းကျင်မှု, သတ်မှတ်ရေး, ကုမ္ပဏီအမည်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စာရိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာ၏အကျဉ်းချုပ်ရှိပါတယ် အသားပေးအလုပ်ရှင်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံ, လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းဂျော့ဘ်ကိုရှာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံပေးချက်များ။ သူတို့ကအစကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအရေးအသားပူဇော်ပြီးအခကြေးငွေမှာ၎င်းတို့၏ site ပေါ်တွင်မီးမောင်းထိုးန်ဆောင်မှုများပြန်လည်စတင်မည်။ အဆိုပါ Naukrigulf app ကို iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် Android ကိုကို၎င်း, App Store မှာများအတွက် Google Play ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Monstergulf အလားတူပင်ဖြစ်သည် ယူအေအီး၏စျေးကွက်များတွင်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေရေးပေါ်တယ်, ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်၊ အိုမန်နှင့်ကာတာနိုင်ငံများအပြင်အာရှနှင့်အရှေ့ဖျားနိုင်ငံအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဆိုက်တွင်အခမဲ့စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေနေသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး၊ သူတို့၏စွမ်းရည်၊ ဒေသတွင်း၌ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ။ Monstergulf ကဏ္ဍအားလုံးတွင်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကို advertise နှင့် Executives နှင့်အပြာရောင်-ကော်လာအလုပ်အကိုင်များအပါအဝင်အားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်ဆင့်သည်။
သူတို့ရဲ့ Monster အလုပ်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများအဘို့, clients များဟာသူတို့ရဲ့သေဆုံးသူ-အခမဲ့နံပါတ်များကိုခေါ်နိုင်ပါတယ် ယူအေအီးနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ သို့မဟုတ်တစ်ပြန်ခေါ်များအတွက်က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်မိမိတို့အမိုဘိုင်းနံပါတ်များကိုစွန့်ခွာ။ ပေးအပ်န်ဆောင်မှုများ Professional ကကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရေးသားခြင်းများပါဝင်သည်, Highlights ပြန်လည်စတင်မည်နှင့် အလုပ်ရှာဖွေရေး Booster ထုပ် တစ်ကြေးမှာ။
အလုပ်သင်နှင့်အားလပ်ရက်များအတွက်လျှောက်ထား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကျောင်းသားများယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ရန်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းရှိပါတယ် သူတို့အလုပ်အကိုင်များအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်အလုပ်အတွေ့အကြုံကိုရယူ။ Intern များသူတို့တစ်တွေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခြေခံပေါ်မှာအဘို့အ interned သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်အတူအချိန်ပြည့်အခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်ကြသည်ဘယ်မှာအများအပြားဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။ အများစုမှာပညာသင်နှစ်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဘို့ကြော်ငြာဘယ်မှာအလုပ်တွင်ကျယ်စွာသို့သော်အများစု အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ အထက်ကိုလည်းအတူတူလုပ်ပါ။ သငျသညျနှင့်အတူအလုပ်သင်ချင်တယ်တဲ့တိကျတဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ရှိလျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်သည် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍများကိုထုတ်စစ်ဆေး သူတို့ရဲ့ website ၏ အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများကိုပါ။
အခါအားလျော်စွာအများအပြားရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်စည်းရုံးနေကြတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝိုင်း အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်နိုင်ငံတကာဘယ်မှာတက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤအဖြစ်ရပ်များမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပေါ်ကိုယ်တွေ့သတင်းအချက်အလက်ရနိုင် စုဆောင်းနေသောကုမ္ပဏီများတိုက်ရိုက််ထမ်းခေါ်ယူမှုကွန်ယက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်, အလုပ်အသေးစိတ်ကိုနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်။ တခါတလေအင်တာဗျူးကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခန်းကဏ္ဍပေါ်မူတည်ပြီး site ပေါ်တွင်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုအဝိုင်းကိုတကျရောကျအခါသင်အစိတ်အပိုင်းကိုဝတ်စားဆင်ယင်သေချာပါစေ။ ဒါကြောင့်မတက်ရောက်မီထိုအဖြစ်အပျက်များ၏ပစ်မှတ်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်ဒါထိုကဲ့သို့သောတရားမျှတသောနှင့် ADIPEC ဘွဲ့လွန်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ HVACR Careers အဖြစ်ဝိုင်း၏အချို့စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုပ်ရှာဖွေရေးပြပွဲဖွင့် ယူအေအီးအတွင်းအမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများမှသို့သော်မှတ်ပုံတင်အဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အ CareersUAE တရားမျှတတဲ့တစ်ဦးမဖြစ်မနေ-တက်ရောက်ရန်ဒူဘိုင်းဝေါလ်ထရိတ်စင်တာမှာကျင်းပလျက်ရှိသည်, ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများပြသခဲ့သည်များမှာဘယ်မှာ။ eFair ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဘူဒါဘီအတွက်အွန်လိုင်းမှအလုပ်မျှတသည်။ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်အင်္ဂလိပ်နှင့် Arabic အဘိဓါန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
အပြင်ကဤတဆယ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်နည်းလမ်းကနေ, သမ်မာကမျြး-of ပါးစပ်များ၏ရိုးရာနည်းလမ်းကိုလည်းသက်သေပြစေခြင်းငှါ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ထိရောက်။ ကိုယ့်ဘဝနိယာမအတိုင်း, သင်နိုင်အောင်အများဆုံးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်မည်လက်ျာဘက်လူအစုအဝေးနှင့်အတူ networking နှင့်အတူရွှေ့သောသူဖြစ်လာသည်။ အဲဒီမှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအလုပ်ဖွင့်လှစ်သိနှင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်သူကအမြဲသို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစုဆောင်းဖို့သငျသညျအကြံပြု။ အလုပ်ရှာဖွေရေးဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုများ join နှင့်ရပ်ရွာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရပ်ရွာမှဝန်ဆောင်မှုဖြစ်မယ့်ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် ထို့အပြင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
အမျိုးမျိုးသော ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဒူဘိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါ သူအေဂျင်စီ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။
တော်တော်များများရှိပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ အဘယ်သူသည်သူတို့စတင်နှင့်ချီတက်ကြပါပြီ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များ။ သင်၏ဇာတ်လမ်းသည်ရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့်အတူတူပင်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းနိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်သင်၏နောက်ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့အပြောင်းအရွေ့ဆင်းသက်ခွင့်ခြေလှမ်းများ။ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်!
ဒူဘိုင်းအတွက်ဆယ်ပါးလူကြိုက်များသောယောဘကိုရှာရန်ပလက်ဖောင်းများ, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးကြိုက်တယ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မှာကြည့်ရှိသည်ဖို့စီမံခန့်ခွဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုသင်တို့အားယခုကမ္ဘာပေါ်မှာနံပါတ်တစ်စီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရနိုင်ပုံကိုသိ နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုဒူဘိုင်းရှိဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်များကိုပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားအတွက်ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက်အချက်အလက်ထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပြီး၊ သင်ဟာ United Arab မှာလမ်းညွှန်ချက်တွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်တွေရရှိနိုင်ပါပြီ စော်ဘွား သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။
Post WhatsApp Number!
Quick Post WhatsApp Number!
Now: Drop Your Updated Number to Dubai City Company me100% Free!
*Drop your Phone to other members in Dubai!
Why would you like to post your WhatsApp number to others?
Your Professional Title for WhatsApp*
This is your title in profile, that's how recruiters will find your phone from Google
*Remember to add your contact details while posting an Letter of introduction Phone number & Email.